Shiinaha Manufacturers boorsadaada Running Customized, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Shandada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Boorsooyin > Boorsada isboortiga > Boorsada ordaya
Si loo ordo, boorsada waa inay lahaataa xargaha garbaha, laabta iyo suumanka dhexda si siman loogu qaybiyo culeyska loona ilaaliyo boorsada mid xasilloon, xasilloon oo ugu muhiimsan inta lagu guda jiro howsha oo dhan. Garbaha garbaha waa in la ballaadhiyo oo la ballaadhiyo, waxyaabaha laastikada laga geliyo laabta ayaa ka caawin doona boorsada la qabsiga dhaqdhaqaaqaaga. Hadday tahay socdaalka maalinlaha ah ama socodka super, halkan waxaa ku yaal hab lagu doorto boorsada saxda ah ee loogu talagalay baahiyahaaga, sidaa darteed uma baahnid inaad ka walwasho inaad wax uga tagto gurigaaga ama aad ku mashquusho orodkaaga waxyaabo aan lahayn kugu habboon, halkii aad ka caawin lahayd Inaanad caqabad ahayn.
1. Soo bandhigida alaabada boorsada lagu ordo:
(1) Ku qanci hamigaaga xiisaha: boorso fudud oo fudud oo fudud; shandaddan ayaa ah wehel weyn oo kaa celin kara biyo inta aad ordeyso, baaskiil wadid, socodka ama meel banaanka u soo baxday
(2) Kaadiheysta biyaha bilaashka ah: 2 litir; waara, caws aan jilicsanayn iyo qashin-qashin qashin-qashin-riixid ah; 2 inji (5 cm) furitaan weyn wey qaboobi kartaa, way fududahay in la nadiifiyo.
(3) Raaxo la beddeli karo: boorso loogu talagalay ragga, haweenka iyo carruurta; loo habeeyay si loo waafajiyo looxyada oo dhan; mesh raaxo leh oo daboolaya suunka garbaha macnaheedu waa inaad si joogto ah u xiran karto saacado.
(4) Tayo lagu kalsoonaan karo: in ka badan shirkado badan oo ajnabi ah oo wax iibiya ayaa caddeeyay tayadeeda iyo qaabkeeda; Jeebabka mesh-ka waaweyn ayaa keydin kara boorsooyinka, taleefannada iyo cunnada fudud.
(5) Waxaan balanqaadeynaa: hadaad wax su'aalo ah ama walaac ah qabtid, fadlan laxiriir kooxdayada taageerada wax soo saarka cajiibka ah; waad isku hallayn kartaa annaga si aan u daryeelo una taageerno howlaha banaanka FOFRER.
(6) Waa wehelka ugufiican ciyaarta: miisaan fudud, raaxo leh, oo aad ugu raaxada dhabarka.
2. Boorsada ordaya product parameters (specifications)
Dhererka 40cmX Width 25.5cmX Dhererka 5cm
3. Sidee loo doortaa boorsada ugu fiican?
(1) Waa maxay boorsadaadu?
Waxay u egtahay wax iska cad, laakiin sida loo isticmaalo boorsada dhabarku aad ayey muhiim u tahay. Miyaad safar ku socotaa mise waad ku dhiirran tahay? Miyaad mudnaanta siisaa biyo-gelinta iyo gaadiidka baahiyaha muhiimka ah-mise labadaba? Iyadoo aan loo eegin ujeedada baakadka, tixgelintaada ugu weyn marwalba waa: Baakaduhu waa inay ahaadaan kuwo yar oo fudud intii suurtogal ah, iyadoo weli la qaadanayo waxaad u baahan tahay. Dhammaan tixgelinta kale waxay ka yimaadaan halkan.
(2) Tixgeli biyo siinta.
Ma u baahan tahay biyo iyo barkado? Rakaabka, tani muhiim maahan, laakiin orodyahannada masaafada dheer, waa lagama maarmaan. Qalabkaaga fuuq-baxa waa inuu lahaadaa waalka qaniinyada si fudud loo-qabsado si aad biyo u hesho markasta, meel kasta. Sidoo kale, mabda 'ayaa ah inaad kaliya qaadan karto isla shayada, xusuusnow in litir kasta oo biyo ah uu u dhigmo koror ah 2 rodol!
(3) Dhar adag oo biyo u adkaysta.
Haddii dharku noqdaan kuwo qasan markii aad timaado meeshaad u socotay, looma baahna inaad dharkaaga bedesho. Raadi dharka ugu yaraan biyuhu xireen. Haddii cimiladu hagaagto, roobka ayay diidi kartaa. Dharka sidoo kale waa inuu ahaadaa mid adag, leh xoojin tol, oo awood u leh inuu u adkeysto culeysyada culus ama lagu tuuro sagxad adag ama qalafsan (sida jirridda gaariga).
Raaxo dheeraad ah, dharka qoyaan-qoyan ee ku yaal dhabarka dambe ee boorsada ayaa ka caawin doona biyaha inay uumi baxaan oo ay yareeyaan halista kuleylka, cuncunka iyo jahwareerka.
5. Xirxirida iyo rarka boorsada socda
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 40cm X 25.5cm X 5cm, waxaan u habeyn karnaa baakadka naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 42cm X 27m X 20cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 5.5Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 4.5Kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadayn doonaa baakidhka shandaddan socodsiinta iyadoo loo eegayo shuruudahaaga.
(9) Haddii aad ubaahantahay shaybaarka shandaddan socodsiinta ah, waxaan dooran doonnaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(3) Waxaan nahay soo saare Disney ah boorsooyinka socda, Wal-Mart boorsooyinka iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
A; <= 1000USD, 100% bixinta kahor.
Calaamadaha kulul: Boorsada socodsiinta, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka